Fitanterana Andranomamy Toamasina – Ambilalemaitso
Mangetaheta fivoaran’ny Canal de Pangalane ny mpanamory
4000 Ariary ny sarandalana mihazo ny Canal de pangalane, etsy ankilany anefa dia fantatra fa isan’ny olan’ireo mpitatitra andranomamy ny fahalotoan’ny canal de pangalane.
12 Taona nanaovana ny fitaterana andranomamy Atoa RAFIDY Jean Louis, nambarany fa tonga hatrany Ambila izy ireo no maka ny entana maketo Toamasina ary mihoatran’ny 100km ny lalana lalovan’izy ireo eny ambonin’ny ranomamy.
Maro ny olana sedrain’izy ireo eny andalana rehefa ratsy ny toe-trandro satria mahatratra 2 ka hatramin’ny 4 andro andalana miandry ny toetrandro tsara izy ireo vao afaka mandroso ny dia. Akoatran’izay dia isan’ny olana fototra ho an’izy ireo ihany koa ny tsy fandoavan’ny mpanjifa ny saran’entana hoentin’izy ireo, fa indrindra ny fiakaran’ny vidin-tsolika manampy trotraka, manginy fotsiny ny fahalotoan’ny Rano. Fantatra fa mahatratra 4000 Ariary ny sarandalana ary mandany 12 ora eny andalana zareo.
Nandritra ny fandalovanay teny antoerana nanaovana ny fanadihadina ihany koa dia fantatra fa mandoa Hetra isan-taona izy ireo eo anivon’ny sampan-draharaha Sany Mar�ant ary mandoa hetra amin’ny fanjakana sy visite technique isan-taona ireo lakana fitaterana vahoaka mihazo ny canal de pangalane iny ary mahatratra 140 000Ariary no aloha amin’izany.
(90) Prud'Homme R. : 08-01-2015 - 16:50